दैब पनि कति नि,र्दयी आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी अर्को व,ज्रपात – ABC NEWS 24
दैब पनि कति नि,र्दयी आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी अर्को व,ज्रपात
काठमाडौ । इटहरीमा एउटा परिवार छ जुन परिवारका ४ छोरा छोरीहरु कसैले पनि आँखा देख्दैनन् । उनीहरुले भोगेका समस्याका बारेमा युट्युवमा सार्वजनिक भएको थियो । तर सोही परिवारमा थप ठूलो बज्रपात परेको छ । दृष्टिविहिन भएर थलिएका इटहरी -२ स्थित लक्ष्मण तामाङका जेठो छोराको मृत्यु भएको छ !
आँखा नदेख्ने ४ छोराको स्याहार सुसार गर्दै आएका लक्ष्मणलाई पुत्र वियोग परेको छ । जेठो छोरा २९ वर्षीय सरोज तामाङको मृत्यु भएको हो। तामाङ परिवारमा २ छोरा र २ छोरी चार जना नै दृष्टिविहिन भएर थला परेका थिए। सहयोगको अपिल गर्दै केही युट्युव च्यानलहरुले उनीहरुबारे समाचार बनाएका थिए । जन्मँदा स्वस्थ जन्मिएका उनीहरुमा उमेर बढ्दै जाँदा दृष्टिविहिन भएका हुन् । उनीहरुमा ९ वर्षको उमेरदेखि अन्धोपनको समस्या देखिएको थियो। उमेर बढेसँगै शरीर कुँजो हुने र हिडडुल गर्नसमेत नसक्ने समस्या भएपछि निकै दुख गरेर लक्ष्मणले छोराछोरी हुर्काएका हुन् ।
जेठा सरोजको मृत्युपछि १५ देखि ३० वर्षसम्मका अर्को एक कान्छा छोरा र दुई छोरीहरु दृष्टिविहीन र शारीरिक अशक्तताका कारण घरमै आमाको स्याहारमा बसिरहेका छन्। कान्छो छोरा अलिअलि बोल्ने गरेपनि अरु भने बोल्न र हिड्न नसक्ने अवस्थामा छन्। ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
← भारतले फेरी दियो धोका – नेपालसँग भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो भारत, हेर्नुहोस के थियो सहमति ?
यसरी नेपालमा बन्दै विश्वकै सबैभन्दा लामो केवलकार, भियतनामको रेकर्ड तोड्दै नेपाल →